မုံရွာမြို့၏ လူထုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုဝေမိုးနိုင် ဖမ်းဆီးခံရသည်ကို ဆွီဒင်သံရုံးမှ စောင့်ကြည့်နေ - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
မုံရွာမြို့၏ လူထုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုဝေမိုးနိုင် ယနေ့ နေ့လည်တွင် ဖမ်းဆီးခံရသည်ကို ဆွီဒင်သံရုံးမှ သိရှိရပါသည်။ ဖမ်းဆီးခံရသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်အရ အဖမ်းမခံရမီတွင် ကိုဝေမိုးနိုင်စီးလာသည့် ဆိုင်ကယ်အား ကားတစ်စီးမှ ဝင်တိုက်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ကိုဝေမိုးနိုင်အပါအဝင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံရသူ အားလုံး သင့်တော်လုံလောက်သည့် ဆေးကုသမှု ရရှိရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ လူ့အခွင့်အရေးများကို လေးစားလိုက်နာရန် တောင်းဆိုပါသည်။ ကိုဝေမိုးနိုင်၏ အခြေအနေအား မိမိတို့ အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေပါသည်။
Sweden is aware that Wai Moe Naing,acommunity leader from Monywa, was arrested today. The video footage from the arrest shows his motorbike being hit byacar before he is detained. We urge that all detainees, including Wai Moe Naing, must be allowed proper health care and that all detainees’ human rights must be respected. We are closely following Wai Moe Naing’s case.